Kpido: data otu mbụ | Martech Zone
Kpido: data nke mbụ
GSTV: Ndị na-azụ ahịa ndị a na-atụgharị uche na mgbapụta na ahụmịhe vidiyo dabere na ọnọdụ
Kwa ụbọchị, ọtụtụ nde ndị America na-abanye n'ụgbọala ha ma na-aga. Fuel elu draịva commutes, azụmahịa, na njikọ; na nke ahụ bụ mgbe GSTV nwere nlebara anya ha na-ekewaghị ekewa. Kwa ụbọchị, n'ọtụtụ iri puku ebe, netwọkụ vidio mba ha nwere oge pụrụ iche nke dị mkpa, mgbe ndị na-azụ ahịa na-etinye aka, na-anabata, na-etinyekwu ego taa ma na-emetụta maka echi na gafere. N'ezie, GSTV na-eru 1 n'ime 3 ndị okenye America kwa ọnwa, na-etinye ndị na-ekiri ha anya, ụda, na ngagharị
Mpaghara 3 nke Mgbanwe maka Ngwa-Akụkụ Na 2017
Wenezdee, Jenụwarị 18, 2017 Wenezdee, Jenụwarị 18, 2017 Ivan Roubstov
Ọ dị mma ịsị na 2016 ghọrọ ọkwa ajụjụ post kwa oge (QPS) maka oge Ebumnuche-akụkụ (DSP) na mgbasa ozi mgbasa ozi na-azụ ahịa. Ma DSP ọ nwere ike ịme ngosipụta nke ngosi 500,000 / nke abụọ ma ọ bụ 3 nde echiche / nke abụọ, nnweta maka ịzụta zụrụ obere nke asọmpi dị iche iche na-asọ mpi n'ofe nyiwe mgbasa ozi mgbasa ozi niile. Taa, ọtụtụ ụdị na-eche na DSP ga-ejikọ aka ya na isi mgbasa ozi niile mgbe ị na-ebute ọwa mmiri ga-erute ma ọ dịkarịa ala